Xafiiska ka hortaga iyo u diyaar garowga masiibooyinka DDSI oo qabtay kulan lagaga hadlayay sidii loo Sii Casriyayn Lahaa Barnaamijka Xogaha Digniinta Hore ee DDSI Kana Dhacay M.Jigjiga. - Cakaara News
Xafiiska ka hortaga iyo u diyaar garowga masiibooyinka DDSI oo qabtay kulan lagaga hadlayay sidii loo Sii Casriyayn Lahaa Barnaamijka Xogaha Digniinta Hore ee DDSI Kana Dhacay M.Jigjiga.
Jigjiga(CN)Jimce Jan-16-2015. Kulankan lagaga munaaqashoonayay casriyaynta barnaamijka xog arurinta,daraasaadka iyo Digniinta hore ee lagaga diyaargaroobayo Masiibooyinka iyo abaaraha ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee nogob huteel ayaa waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiin ka socay dhamaan xafiisyada horumarinta DDSI, hay’adaha aan dawliga ahayn iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Kulankaasi oo ay ujeedadiisu ahayd sidii dib u casriyay loogu samayn lahaa baraamijka xog ururinta xaalada dhabka ah ee bulshada deegaanka oo hore loogu soo shaqayn jiray muddo 5 sanadooda ah loona baahan yahay in hadda dib loo casriyeeyo.
Haddaba waxaa kulankan ayaa furitaankiisii uu ka hadlay wasiirka ka hortaga iyo u diyaar garowga masiibooyinka DDSI mudane maxamed daahir wuxuuna sharax guud ka bixiyay barnaamijka xog ururinta hablololeedka bulshada deegaanka, isaga oo tilmaamay in uu laf dhabar u yahay waxqabadka xafiisyada kala duwan ee deegaanka sidoo kalena u yahay baraanika kaliya ee lagula socdo hab’nololeedka bulshada xoolo dhaqato beeralayda ah sida biyaha waxbarashada caafimaadka iyo beerahaba.
Wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in kulankani ka dib ay khuburo ku xeel dheer habka xog ururinta casriga ay u kala bixi’doonaan 17 deegaan dhaqan dhaqaale oo uu deegaankeenu leeyay si loogu soo sameeyo daraasaad cusub oo lagu hirgaliyo baraanijka xog ururinta digniinta hore ee casriga ah.
Kulanka ayaa intii uu socday si qoto dheer loogu gorfeeyay jihooyinka lagu hagidoona baraamijka xog ururinta digniinta hore ee casirga ah ee 5ta sanno ee soo socota maadaamo oo shantiisanba mar dib loo casriyeeyo